वैकल्पिक सडक निर्माण शुरू | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार वैकल्पिक सडक निर्माण शुरू
on: १८ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०७:५४ प्रदेश समाचार
वैकल्पिक सडक निर्माण शुरू
पर्वत । प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी पोखरा पुग्ने छोटो सडक निर्माण गर्न थालिएको छ । पर्वत र बागलुङलाई पोखरा जोड्ने पोखरा–बागलुङ राजमार्गको विकल्पको रूपमा जैमिनी–पोखरा सडक निर्माण थालिएको हो । स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा राजधानी जोड्ने छोटो सडक बनाउन लागेका हुन् ।
दुई नगरको साझेदारीमा अहिले सडक स्तरवृद्धि गर्ने क्रममा पर्वत खण्डमा पर्नेे देवीस्थान–खानीगाउँ–शङ्करपोखरी–थापाठाना–कार्कीनेटा हुँदै स्याङ्जा जोड्ने र जुग्ले हुँदै नौडाँडा जोड्ने सडक बुधवारदेखि स्तरोन्नति गर्न थालिएको छ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मिशेराबाट सडक स्तरोन्नतिको कार्ययोजना तय गरेको छ । मेयर इन्द्रराज पौडेलका अनुसार सडकका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।
यो सडकलाई दुई जिल्लाको आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर हेरिएको छ । जैमिनी र फलेवासका बासिन्दा पर्वतको सदरमुकाम कुश्मामा नपुगी पोखरा पुग्ने अन्य कुनै वैकल्पिक सडक अहिलेसम्म छैन । सदरमुकामसम्म घुमेर जाँदा समय र खर्च बढी लाग्ने गरेको छ ।
पर्यटन, कृषि र नगरपालिकाको सम्बन्ध प्रदेशसँग सहज रूपमा जोड्न यो सडक उपयोगी हुने फलेवासका मेयर पदमपाणि शर्माले बताए । सडक स्तरोन्नतिका लागि नगरपालिकाले रु. ४५ लाख पहिलो चरणमा विनियोजन गरेको र अर्को चरणमा थप रू. ४५ लाख उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । जैमिनीघाटबाट शुरू भएको सडकले साविकका एक दर्जन गाविसलाई समेट्छ । यसबाहेक स्याङ्जा र बागलुङका दुई स्थानीय तहलाई समेत लाभ हुनेछ ।
सडक विस्तारपछि ग्राभेलिङ गर्ने, नाली निर्माण गर्ने र रिटेनिङ वाल बनाउने योजना रहेको नगरपालिकाले बताएको छ । बागलुङको जैमिनी र पर्वतको फलेवासका बासिन्दालाई अहिले पनि पोखरा जान ४ घण्टा लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो सडक बनेमा २ घण्टामै पोखरा पुग्न सकिने बताइएको छ ।